Hoesorina izay tsy mahavaha olana ? Miverina ny delestazy eto an-dRenivohitra | NewsMada
Hoesorina izay tsy mahavaha olana ? Miverina ny delestazy eto an-dRenivohitra
Par Taratra sur 22/04/2016
Na tsy tenenina amin’ny besinimaro aza, mahafantatra ny mpanjifa fa miverina indray ny fahatapahan-jiro eto an-dRenivohitra. Mangataka vokatra ao anatin’ny telo volana amin’ny minisitra ny praiminisitra vaovao. Sahiny tokoa ve ny hanala izay tsy mahomby?
Tsy mety mivaha! Maro ihany izay minisitra nifandimby teo izay, milokaloka hitondra aina vao sy vahaolana ary handray andraikitra. Ankehitriny, miverina indray ny fahatapahan-jiro eto an-dRenivohitra. Lazaina fa nahatonga ny olana ny fahasimban’ny gropy iray amin’ireo telo any Andekaleka. Tsy nohazavaina anefa raha nanomboka oviana izany fahasimbana izany satria efa naharitra volana maromaro ny fanapahana herinaratra, natao delestazy.
Manodidina ny adiny iray na roa ora ny faharetan’ny fahatapahana, indrindra amin’ny maraina. Misy kely ihany koa amin’ny tolakandro saingy mateti-piavy, maharitra minitra vitsivitsy. Manimba zavatra mandeha amin’ny herinaratra anefa izy ireny, indrindra ny fitaovana informatika, ohatra.
Manara-maso ny vondrona iraisam-pirenena
Santionany amin’ny fanamby mila vahan’ny minisitry ny Angovo vaovao ny delestazy, tsy eto an-dRenivohitra ihany, fa manerana ny tobin’ny Jirama. Ao anatin’izany ny tsy fahampian’ny herinaratra satria tsy ampy ny gazoala mampandeha ny milin’ny Jirama.
Voalaza fa efa ho avy ny tetikasa Pagose, tohanan’ny Banky iraisam-pirenena.
Raha ny zava-nisy ny taona 2015, misy raharaha nahavoarohy minisitry ny Angovo fony Tetezamita sy ny tale jeneraly teo aloha any amin’ny rafi-pitsarana Chaine pénale, taorian’ny antontan-taratasy nalefan’ny Bianco. Toy ny raharaha andramena ihany, tsy nisy tohiny izany taty aoriana. Manara-maso akaiky ny mpanjifa, ny vondrona iraisam-pirenena, ary ho hita eo ny fepetra raisin’ny praiminisitra, afaka telo volana, raha tsy misy ny vokatra.